ZINWA Yoshaya Mishonga Yekuchenetsa Mvura muHarare
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare riri kuenderera mberi, kunyange hazvo ZINWA yakati zvinhu zvichange zvagadzirisika kusvika pari zvino. Mutauriri weZINWA, VaTsungirayi Shoriwa, varamba kutaura pamusoro penyaya iyi.
Gurukota rinoona nezve mvura, Engineer Munacho Mutezo, vakashanyira Jaffray Morton Waterworks neChina vachida kuona zviri kukonzera dambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare.
Zinwa inoti kushaikwa kwemagetsi panzvimbo inocheneserwa mvura, ndiko kuri kupa kuti muguta mushaye mvura yakakwana. Asi kambani yeZESA inoti kunyange hazvo magetsi ari kumboenda kwemaawa akati kuti, dambudziko rekushaya mvura harisi kukonzerwa nekushaikwa kwemagetsi.
Studio7 yaenda neChishanu ku Morton Jaffray Waterworks ichida kunoona kana magetsi ariko zvechokwadi. Pasvika Studio7 panzvimbo iyi, magetsi anga achishanda. Asi vamwe vashandi vepanzvimbo iyi, vaudza Studio7 kuti dambudziko ravakatarisana naro ndere kushaya mishonga yekuchenesa mvura inenge yadhonzwa kubva muLake Chivero.
Patience Rusere weStudio Seven aita hurukuro nemutori wedu wenhau, Thomas Chiripasi, uyo ashanyira Morton Jaffray Waterworks, uko kunzonzi ne zZnwa hakuna magetsi ekupomba mvura, izvo zviri kupa kuti mvura inetse kuwana.